Ihe kacha mma 24 Bow Echiche Idebe maka Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Ụta egbugbu na mkpịsị aka gị na-eweta ncheta ma ọ bụ mee ka ọ bụrụ ihe ncheta
Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga maka mkpịsị ụta na mkpịsị aka ha ichetara ha oge pụrụ iche n'oge ha.
2. Ụta egbu egbu n'apata ụkwụ enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, na-eyi obere uwe na obere mkpịsị ụkwụ ga-aga maka egbu egbu na-egbu ha n'akụkụ ụkwụ ha iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
3. Ụta igbu egbu maka ubu na-eme ka ụmụ agbọghọ mara anya
4. Na-acha anụnụ anụnụ ink mix imewe ụta egbu egbu n'olu mee ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ ndị na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke ga-aga maka igbu egbu egbu na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na n'olu na akara pink ka ha mee ka ndị mmadụ mara mma
5. Ụmụ nwanyị dị ka ụta egbu egbu na nkwonkwo ụkwụ iji mee ka ọ mara ya
6. Ụmụ agbọghọ na-aga ụta egbu egbu na nkwonkwo ụkwụ na na mkpịsị ụkwụ iji mee ka ebe nchekwa ahụ dị
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a na-egbu egbu egbu na-eme ka ha cheta otu oge pụrụ iche ha nwere na ndụ ha.
7. Ụta egbu egbu na mkpịsị aka na-acha odo odo ink mix-eme ka ọ na-adọrọ mmasị
Ụfọdụ ndị di na nwunye na-egbu egbu egbu na mkpịsị aka ha iji gosipụta ịhụnanya ebighi ebi ha n'ebe ibe ha nọ
8. Ụta egbu egbu n'akụkụ Ụmụaka ndị inyom na-eme ka anya ha mara mma
Ụmụ nwanyị ndị na-acha uhie uhie ga-enwe mmasị na ink oma, na-egbu egbu egbu egbu n'akụkụ ha iji mee ka ha mara mma
9. Ụmụ agbọghọ na-eme ka egbugbere ọnụ na-egbu egbu na mkpịsị ụkwụ ha
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a na-egbu egbu na-egbu egbu n'elu ụkwụ ha iji mee ka ụkwụ ha mara mma
10. Ejiji nkedo akwa nke igbu ụta na azụ nke ụmụ nwanyị na-eme ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na-egbuke egbuke ga-aga maka ink odo odo, ụta akara egbu egbu na azụ ime ka ha yie ihe mara mma ma mara mma
11. Ụta egbugbu na azụ azụ na-eme ka nwanyị ele anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ nwanyị ga-aga maka egbu egbu na azụ ha. Nke a na-eme ka ha mara ihu ọha n'anya
12. Ụta egbu egbu na ụkwụ eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ ga-aga igbu egbugbu na ụkwụ ha. Nke a na-eme ka ha nwee anya dị ịtụnanya.
13. Ema na acha anụnụ anụnụ ụdị egbu egbu n'akụkụ, ga-eme ka ụmụ agbọghọ na-egwu ma na-ejikọta ya na ejiji na-acha anụnụ anụnụ
Ụmụ nwanyị ndị na-egbuke egbuke na-acha uhie uhie ga-aga nke a na-egbu egbu egbu n'akụkụ n'akụkụ iji mee ka ha dịkwuo mma, maa mma na egwuregwu na-acha anụnụ anụnụ nke trouser
14. Ụta egbu egbu maka apata ụkwụ eme ka anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka egbu egbu mara mma n'apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
15. Ihe eji eme ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'elu azụ, mee ka ụmụ agbọghọ nwee anya Splendid
Ụmụ nwanyị na akpụkpọ anụ peach ga-aga maka egbuke egbuke egbuke egbuke a n'olu ha, iji mee ka ha nwee anya mara mma.
16. Ụmụ agbọghọ na-aga igbu egbugbu na azụ n'azụ ha iji mee ka ha mara mma.
Ụmụ agbọghọ ndị na-eyikwasị n'elu elu ga-ahụ n'anya maka igbu ụta na azụ aka ha iji dọta uche ndị ọzọ ma nye ha anya mara mma.
17. Ụta ụta na -emepụta ink na-acha odo odo n'azụ ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ na-ele anya.
Ụmụ agbọghọ ndị na-etinye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ oroma ga-aga maka ink na-acha uhie uhie, na-egbu egbu egbu azụ n'azụ ụkwụ ha iji mee ka ha na-ele anya ka ọ na-emetụta akpụkpọ ụkwụ.
18. Ụta a na-egbu egbu na-eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị ebube
Ụmụ agbọghọ na-agbapụ agbapụ na-achọ ka a na-egbu egbu na-egbu ha. Nke a na-enye ha anya dị ebube
19. Ụkwụ na-egbu egbu n'azụ ụkwụ na-eme ka ndị inyom mara mma.
Ụta ụta na azụ nke ụkwụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma ma na-adọrọ mmasị ndị mmadụ.
20. Ụta egbugbu n'azụ mee ka nwa agbọghọ mara mma ma mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ igbu egbugbu n'azụ ha. Nke a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
21. Ụkwụ na-egbu egbu n'azụ ụkwụ n'ihi na ndị inyom na-egosi ọdịdị ha.
Nwa na-ewu ewu na-egbu egbu n'azụ azụ nwa agbọghọ ahụ yiri otu ụzọ ejiji ya ma na-eme ka ọ mara mma mgbe ọ na-eyi otu ikiri ụkwụ
22. Ụta egbugbu n'azụ ogwe aka na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Otu nwa agbọghọ hụrụ n'anya na-egbu egbu na azụ azụ. Nke a mere ka ha dị mma.
23. Ụta egbugbu nwa agbọghọ ahụ nye ya Fabulous anya
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka ụdị a na-egbu egbugbu n'aka ha. Nke a na-enye ha ihe ama ama ama
24. Ụkwụ na-egbu egbu na-eme ka ndị inyom nwee anya dị egwu
Ụmụ nwanyị na-enwe mmasị igbu egbugbu n'aka ha na ozi. Nke a na-enye ọhụụ ahụ
25. Ụta egbu egbu na ụkwụ eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị mma
Ụmụ nwanyị na-achọ ka egbu egbu na-egbu egbu n'ụkwụ ha ka ha nye ha anya dị egwu.
Tags:na-egbu egbu egbugbu maka ụmụ agbọghọ
na-adọ aka mmarip tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu osisi lotusọdụm ọdụmazụ azụudara okooko osisinnụnụokpueze okpuezeegwu egwudi na nwunyemehndi imeweakara ntụpọagbụrụ ebozodiac akara akaraakpị akpịaka akaỤdị ekpomkpaima ima mmandị na-egbuke egbukeaka mma akaegbu egbuechiche egbugbuegbu egbu mmirin'olu oluGeometric Tattoosarịlịka arịlịkaegbu egbu okpuegbu egbu diamondUche obiegbu egbu egbuenyí egbu egbuna-egbu egbuaka akaụkwụ akakoi ika tattooụmụnne mgbuAnkle Tattoosenyi kacha mma enyimma tattoosegbu egbu hennaakwara obiegbu egbu ebighi ebiNtuba ntugharindị mmụọ ozingwusi pusiegbugbu maka ụmụ agbọghọọnwa tattoosegbugbu egbugbuEgwu ugo